Rakkoon nageenyaa daangaa Oromiyaa fi Beenishaagul Guumuz umaame tasgabbaa’e – Fana Broadcasting Corporate
Rakkoon nageenyaa daangaa Oromiyaa fi Beenishaagul Guumuz umaame tasgabbaa’e
Finfinnee, Mudde 24,2011(FBC)-Rakkoon nageenyaa humnoota hidhataniin daangaa naannolee oromiyaa fi Beenishaanguul Guumuzitti umaame tasgabbaa’uu Komaand poostiin rakkinicha hiikuuf hundaa’e beeksise.
Komaand Poostichi ibsa TOI’f kenneen, Godinaalee Wallagga Afran, Iluu Abbaaboraa fi Buunnoo Baddalleettiiakkasumas naannoo Beenishaangul Gumuuz, Kaamaashii fi Maa’oo Koomootti humnoonni hidhatan miidhaa geessisaa turuu ibsaniiru.
Kanaaniis, sochii nageenya naannichaa booressuu, lammiilee qee’ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisuu, ajjeesuu fi miidhaa diinagdee raawwataa turaniiruu jedheera.
Sadaasa darbe irraa eegaluun hojii isaa ifaan kan eegale Komand poostiin kun, jiraattootaa naannoo kanneen mariisisuudhaan hirmaachisuun yaalameeraa jedheera ibsichi.
Humnoonni naannawaa kana unkuraa turan nagaadhaan harka isaanii akka kennan taasisuun kan danda’ame yemmuu ta’u, waamicha nageenyaa kana kan didan irratti ammoo tarkaanfii irra deebii hin qabne fudheeraas jedheera.
Humnoota badii hedduu too’annoo jala oolchuu isaa kan hime koomaand poostiichi, meeshaalee waraanaa garaagaraa badii kanaaf itti fayyadamaa turan hedduu fi maallaqa miiliyoonotaan lakkaawamuus too’achuu ibseera.
Tarkaanfii fudhatameeniis, bakkeewwam eeramanitti yeroo ammaa tasgabbiin bu’ee daandiiwwan, manneen barnootaa, dhaabbileen fayyaa, dhaabbileen daldalaa cufamanii turan banamaniiru.
Komaand Poostichi humnoota too’ataman, meeshaalee, maallaqaa fi galteewwan badii taasisun itti fayyadama a turan too’annoo jala oolfaman dhiyeenyatti ifa kan taasisu ta’uu ibseera.
Hojii hanga yoonaa hojjetameen tumsi ummataa guddaa ta’uu ibsuudhaan tumsi ummanni nageenyaaf taasisu kun cimee akka itti fufuus waamicha dabarseera.